Mogadishu Journal » 2020 » January » 8
Mjournal :-Madaxweynaha Maamulka Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Deni ayaa maanta qaabilay safiirka Finland ee Soomaaliya Erik Lundberg iyo wafdi uu hoggaaminayo. Sidoo kale, waxay kawada xaajoodeen mashaariicda horumarineed ee Finland ka taageerto Puntland, sida arrimaha...
Mjournal :-Telefishinka dalka Iran ayaa shaaciyay in 80 askari oo Mareykan ah ku dileen weerar ay ku qaadeen saldhigyo Ciidamada Mareykanka ku lahaayeen dalka Ciraaq. Telefishinka dowladda Iran ayaa sheegay in illaa 15 gantaal oo lagu weeraray labo saldhig oo Mareykanka lahaa...
Mjournal :-Guddiga Farsamada iyo Maamul dhisidda ee Dowlad Goboleedka Galmudug oo shirjaraaid ku qabtay magaalada Dhuusamareeb ayaa sheegay in ay si rasmi ah u bilaaban doonto xulista Xildhibaanada Baarlamaanka Galmudug. Guddoomiyaha Guddiga Farsamada iyo Maamul dhisida Galmudug...
Mjournal :-Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamud Maxamed (Cumar Filish) ayaa Maanta oo Arbaco ah waxaa uu booqasho ku tegay Xarunta Guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka. Kulan gaar ah ayuu halkaasi waxaa uu kula qaatey...
Mjournal :-Waxaa isasoo taraya khasaaraha dhimasho iyo midka dhaawac ee uu geystay qarixii Maanta barqadii ka dhacay Bar Koontorool oo ku taalla Isgoyska Sayidka ee Magaalada muqdisho. Daka qaraxaas ku dhintey ayaa waxaa kamid ah Agaasimihii Maamulka & Maaliyadda ee...
Mjournal :-Qarax xooggan oo ahaa gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay ayaa goor dhow ka dhacay magaalada Muqdisho, iyadoo warar kala duwan uu ka soo baxayo. Qaraxa ayaa la sheegayaa in lala beegsaday Koontaroolka Isgoyska Sayidka ee laga ilaaliyo Madaxtooyada Villa Somalia....